यस्ता हुन्छन् मृगौला फेल हुन लागेको प्रारम्भिक संकेत, यी हुन् बचाउने आठ उपाय ! – Sandesh Press
July 4, 2021 591
मृगौला फेल हुनुको अर्थ हो मृगौलाले काम गर्ने दर १५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु । मृगौला फेल हुनु केही दिन पहिला शरीरले केही संकेत दिन थाल्दछ । त्यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । डाक्टर अबरार मुल्तानीले यस्तै संकेतका बारेमा बताएका छन्ः
पिसावको मात्रा अचानक वा विस्तारै कम हुँदै जानु ।शरीरमा सुजन आउनु, विशेषगरी अनुहारमा । मन स्थिर नहुनु वा वान्ता हुनु ।रक्तचाप अचानक बढ्नु । निरन्तर रगतको कमी हुँदै जानु । तौल अचानक कम हुनु ।
उच्च रक्तचाप किड्नी फेल हुनुको अर्को मुख्य आम कारण हो । उच्च रक्तचापबाट पनि रक्त नलिकाहरुको भित्तामा हानी पुग्दछ । स्वस्थ मृगौलाका लागि रक्तचाप पनि १४०÷९० एमएमएचजीभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।
खानपानको महत्वलाई कसरी पो नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ । फलफूल, सागपात र फाइबरयुक्त खानेकुराबाट तौलका साथसाथै किड्नीको स्वास्थ्य पनि राम्रो रहन्छ । खानामा नुनको मात्रालाई पनि कमभन्दा कम गर्ने कोशिस गर्नु जरुरी छ।
रक्त प्रवाहहरुलाई नष्ट गर्नमा धुम्रपानको ठुलो हात हुन्छ । यसका कारण रगत राम्रंोसँग फिल्टर हुन सक्दैन । चुरोट छोड्दा अरु पनि कयौ प्रकारका फाइदा हुन्छन्,जसका बारेमा हामी अक्सर कुरा गर्ने गर्दछौ ।
Prevकाठमाडौं उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाइदै, सार्वजनिक बस लगाएत पसलहरु खुल्ने
Nextसपनामा यी ५ चिज देख्नुभयो ? उसोभए तपाई छ्ट्टिै बन्नुहुनेछ धनी
बहुचर्चित साउथ फिल्म केजीएफ च्याप्टर २ हलमा गएर हेर्न नपाएका दर्शकका लागि आयो अहिलेसम्मकै खुशीको खबर